10 mins DFW Airport, yangasese yangasese, Ibhafu ekwabelwanayo ngayo - I-Airbnb
10 mins DFW Airport, yangasese yangasese, Ibhafu ekwabelwanayo ngayo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDenise
Ikhaya lineendawo zokuhlala ezi-2, ikhitshi, ipaki enje ngasemva kweyadi enechibi elincinane, kunye netafile ejingiweyo yepiknikhi eyadini yangaphambili. Igumbi lokulala linebhedi enkulu, i-FIOS engenazingcingo ye-Intanethi kunye nomabonwakude kunye negumbi lokuhlambela labucala. Kufuphi ne-NW Park-iindlela zokuhamba, iinkundla zentenetya, kunye nendawo yokwenza umthambo kwakhona kufutshane ne-6 yeendlela ze-Irving.
Indawo epholileyo kwaye ephumlayo, ecocekileyo. Iindwendwe ezanelisayo.
4.71 · Izimvo eziyi-549
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi549
Kwiibhloko ezimbalwa kwiBeltline Rd, ndinoTom Thumb, CVS kunye neKroger. Ndinayo nevenkile yokutya yaseIndiya, kunye neMarike yeMexican Meat igcwele imveliso. Iindawo zokutyela ziquka iLa Margarita, iHimalayan Everest yokutyela yamaNdiya, uMama kunye nePop yaseMexico, iPuerto Rican, indawo yokutyela yaseAfrika, kunye neTshayina. Iivenkile zokutya ezikhawulezayo ziquka i-KFC, i-Whataburger, i-Boston Market, i-Chipotle, i-Taco Bueno, i-Taco Bell, i-Jack kwiBhokisi. Zonke iindawo zokutyela ziibhloko ezimbalwa ukuya kumayile ukusuka endlwini. Ithiyetha yase-Irving Mall ye-AMC ikwimayile enye kude igcwele kunye nezihlalo ezithe tyaba zesikhumba kunye nebha. I-NW Park enendlela entle yokubaleka, ichibi, amadada kunye nofudo lukwiibhloko ezimbalwa kude.
Ndingunobhala ohambahambayo woluntu ovala imali-mboleko yendlu kunye nerhafu yepropathi. Kukho isitshixo sangaphandle sokuba iindwendwe zizivumele zingene, ukuba ndikwidinga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Irving